जागिर चाइयो? हामी दिन्छौं जागिर ३० देखि ५० हजार तलब (हेर्नुहोस भिडियो सहित) NATIONAL NEWS – Nayabook
जागिर चाइयो? हामी दिन्छौं जागिर ३० देखि ५० हजार तलब (हेर्नुहोस भिडियो सहित) NATIONAL NEWS
पढाइ सकियो, तर जागिर छैन ।’ यो धेरैलाई लागेको सम स्या हो । तर जागिर खोजेर समय वर्वाद गर्नुभन्दा आफुले केहि काम सिके जागिरले आफुलाई खोज्दै आउँछ । नेपा लमा केहि काम गर्नेहरुको यति खडेरी छ कि तपाईं सोच्न समेत सक्नुहुन्न ।पुरा सम्पर्क र जानकारीको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस 👇️ यी
काम सिके बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता हट्छ भने राम्रो कमाई पनि हुन्छ ।१. तपाईंले एसएलसी सम्म पनि पढ्नु भएको छैन भने,कफी बनाउन सिक्नुहोस् । बजारमा प्रोफेसनल कफी बनाउन सिकाउने ठाउँहरु छन् ।सम्पर्कको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस 👇
️बजारमा कफी बनाउने व्यक्तिहरुको निकै खाँचो छ । यति गर्नुभयो भने तपाईंले महिनाको ३० देखि ३५ हजार सम्मको काम पाईहाल्नु हुन्छ।२.धेरैलाई मार्केटिङ भनेपछि वाक्कै लाग्छ ।तर तपाईं अरुसँग राम्रोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ भने विज्ञापनको आधारभूत ज्ञान राखेर मार्केटिङ सिक्नुहोस् ।पुरा सम्पर्क र जानकारीको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस 👇️अहिले
सामान्य रुपमा भ्याट बिल काट्न जान्ने, रिसिप्ट बनाउन जान्ने र अरुसँग कुरा गर्न जान्नेहरुलाई अनलाइन मिडियामा निकै राम्रो सुविधा छ । यस्तो काममा जानकार राख्ने र अलि बाठो मान्छे भए अनलाइन मिडियाहरुले २० हजारभन्दा माथि तलव दिन्छन् । यो काम सिक्न पनि त्यस्तै १५ दिन मात्र लाग्छ ।सम्पर्कको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस 👇️
३. कम्प्युटरमा रुची राख्नुहुन्छ भने कम्प्युटर बनाउन,सिक्नुहोस् । यो काम गर्नेहरुको पनि ठुलो माग छ बजारमा । बजारमा हार्डवेर र सफ्टवेर सिकाउने संस्थाहरु प्रसस्तै छन् । कम्प्युटर बनाउन र नेटवर्कबारेमा राम्रो ज्ञान मात्र हुने हो भने त्यो व्यक्ति नेपालमा कहिलेपनि बेरोजगार हुँदैन ।४. भिडियो क्यामरा चलाउन सिक्नुहोस् ।पुरा सम्पर्क र जानकारीको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस 👇️
नेपालका,टेलिभिजनमा मात्र होइन विभिन्न सभा समारोहको भिडियो खिच्न जान्नेहरुको माग ठुलो छ भने आपूर्ति निकै कम छ । यो पेशामा त महिनाको १ लाख रुपैयाँसम्म पनि कमाउन सकिन्छ । दिनमा यस्ता क्यामराम्यानहरुलाई स्टुडियोहरुले वा विवाह जस्ता कार्यक्रम खिच्नेहरुले दिनकै ५००० सम्म दिन्छन् ।सम्पर्कको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस 👇️